'Zimbabwe needs leadership that is different from Zanu PF to get the country moving again' | My Zimbabwe News
Home Blog ‘Zimbabwe needs leadership that is different from Zanu PF to get the...
‘Zimbabwe needs leadership that is different from Zanu PF to get the country moving again’
EVEN though Zanu PF officials vehemently denied unethically taking over control of the distribution of relief aid donated for Cyclone Idai survivors recently, the evidence of Zanu PF-branded vehicles waiting to collect relief items was there for everyone to see.
That is the way Zanu PF had been taught by none other than President Emmerson Mnangagwa.
An authentic video that has emerged that was taken while Mnangagwa was Vice-President exposes him as the chief architect of the Zanu PF nefarious practice of denying MDC supporters any form of assistance.
Mnangagwa is seen ordering Zanu PF officials gathered at a formal party meeting to deny MDC supporters any form of assistance, saying loudly and clearly that MDC supporters’ needs should be addressed at Harvest House.
Mnangagwa, therefore, is only pretending when he says all Zimbabweans should have access to resources because even in his election campaign, food donations and agricultural implements were distributed along partisan lines.
MDC legislators Morgen Komichi and Tabitha Khumalo recently stormed out of a meeting to distribute the cyclone relief aid in Chiredzi when a parliamentary team they were part of came face-to-face with the reality that only Zanu PF supporters had been gathered to receive the aid.
Zimbabwe just needs leadership that is different from Zanu PF to get the country moving again, and the international community should know the kind of “leadership” that the people of Zimbabwe are having to deal with.
With his soiled past, Mnangagwa is just not the right person to take Zimbabwe out of this mess.
— Kennedy Kaitano
Previous articleMost loved leader Nelson Chamisa reveals when Zimbabwe sanctions will be removed
Next articleADVICE: I’m 23 and I’m dating a 16-year-old boy, I sometimes feel like what I’m doing is wrong